“Raayyaan ittisaa heera mootummaa bu'uureffachuun fedhiifi faayidaa ummataaf kan hojjetu ta’uu qaba” -Doktar Abiyyi Ahimad
Heeraaf amanamuudhaan dhaaba siyaasaa kam irraayyuu bilisa ta'ee sabootaafi sablammoota giddu-galeessa godhachuun daangaa biyyaa kabajchiisuufi nageenya mirkaneessuu, fedhiifi faayidaa ummataafi biyyattii kabachiisuun dirqama raayyaan ittisa biyyaati.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahimad Sanbata darbe hoggantoota raayyaa ittisa biyyaa waliin dhimmoota biyyaafi wayitawoo irratti mari'ataniiru.
Faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu, siyaasa, dinagdee, tekinoloojii, dippiloomaasiifi humna raayyaa qindeessuun birmadummaa biyyaa mirkaneessuuf raayyaan ittisaa gahee bakka bu’ummaa hinqabne qaba kan jedhan Doktar Abiyyi, fedhiifi faayidaa biyyaalessaa jechuun fedhii dantaa ummataa waan ta’eef, raayyaan ittisaa heera mootummaarraa madde qabatee fedhiifi faayidaa ummataaf kan hojjetu ta’uu akka qabu hubachiisu.
Seenaan hundeeffama mootummaa biyyoota tokko tokkoo akka mul'isutti, jaarraa 19fafi 20fa dura faayidaafi fedhiin biyyaa kan maddu karaa anga'oota adda addaafi dhaabbilee amantaatiin ture kan jedhan Doktar Abiyyi, fedhiifi faayidaan biyyaalessaa ammayyaawaan garuu ummata kan bu'uureffateedha. Ibsituun humna biyyoolessaa mul’ata nageenya, misoomaafi dimookiraasii milkeessuufi kabaja ummata biyya keenyaafi birmadummaa biyyaa kabachisuudha jedhan.
Haala qabatamaafi wayitaawaa ilaalcha keessa galchuun gara fuula duraatti raayyaan ittisaa keenya jijjiramuu qaba kan jedhan Doktar Abiyyi, ka’umsi rifoormii haala siyaasa, dinagdeefi hawaasummaa biyyaafi miira ummataati jechuun dubbatu.
Yeroo dhiyoo asitti biyya keenya keessatti siyaasni keessaa tasgabbaa’uu dhabuun, rakkoon cimaa kan aggaamame ta’uu Doktar Abiyyi eeruun, mootummaan rakkoo ofii uume hiikuu hin danda’u hanga jedhamutti ga'us rakkoo uumame gara carraatti jijjiiruun tarkaanfii jijjiiramaa si'ataa fudhachuu abdii irra deebiin horachuun jijjiirama kana bal’isuuf haala mijataa uumeera jedhu.
Haaluma kanaan rifoormiin raayyaa ittisaa inni ijoon ogummaasaa guddisuuf akka ta’ee eeraniiru. Kana jechuun raayyichi gahumsa ogummaa gonfatee, miira itti gaafatamummaan kan socha’u ta’uu qaba. Kun yoo ta'eedha raayyaan ittisaa namuusaaf kan bitamuufi haala siyaasa yeroof salphaatti harka kan hin kenniine, akkasumas fedhiifi faayidaa ummataa kan kabachiisu ta’a. Ce’umsa aangoo dhiyeenya taasifametti naamuusa raayyaan ittisaa agarsiises ajaa'ibsiifataniiru. ogummaan akkanaa kun cimee itti fufuu qaba jedhaniiru.
Humna raayyaa ittisaa cimsuun humna lafoofi qilleensa Afrikaa irraa biyyoota dursa qabatan waliin kan hiriirre ta’uu ibsanii, humna galaanarraas yeroo itti aanutti gabbifachuu qabna jedhaniiru.
Heerri mootummaa RFDI raayyaan ittisaa ibsituu sabaafi sablammootaa, siyaasa kamuu irraa bilisa ta’ee bulchiinsa siiviliifi heera mootummaaf abboome, ergama birmadummaa biyyaa kan kabachiise waan ta’eef, amala heera mootummaa eegee itti fufsiisuu qaba jedhu.
Kaayyoon raayyaa ittisa biyyaa inni ijoon ergama nageenya kabachiisuusaa ga'umsa olaanaan ba'achuun fedhiifi faayidaa ummataa kabajuu, akkasumas birmadummaafi kabaja biyyaa mirkaneessuu akka ta’e himu.
Walumaagalatti, humna, dandeettiifi ga'umsa raayyaa ittisa biyyaa cimsuun ummatniifi biyyattiin yaaddoo nageenyaa malee akka jiraattu taasisuufi sochiin jijjiiramaa biyyattii keessatti eegalame cimee akka itti fufu taasisuu keessatti gumaacha olaanaa qaba. Kanaafuu humna, dandeettiifi ga'umsa raayyaa ittisa biyyaa guddisuufi fooyyessuu barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 7728
Guyyaa mara/All_Days 1817148